अभिनेत्री श्वेता खड्काले यस्तो मार्मिक स्टाट्स – – eSidhakura
बालुवाटारमा सं’घियता खा’रेज गर्ने छलफल चल्यो-जनार्दन
अज्ञात रोगले मर्न थाले कुखुरा
पारसकी छोरी कृतिकाको व्यंग्य
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बाइडेनलाई बधाई
मुख्य पृष्ठसमाचारअभिनेत्री श्वेता खड्काले यस्तो मार्मिक स्टाट्स –
अभिनेत्री श्वेता खड्काले यस्तो मार्मिक स्टाट्स –
काठमाडौं, अभिनेत्री श्वेता खड्काले आफ्नो जीवनको दु:खद अध्याय ब’न्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा आफू पुगेको बताएकी छन्। उनी मंसिर २२, सोमबारमा बिहे गर्दैछिन्। ‘म जीवनको दु:खद अध्याय ब’न्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु,’ उनले बिहेको पूर्वसन्ध्यामा, आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन्, ‘त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतीतलाई च’टक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन। अतीतका मीठा पलहरूलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्य सजाउने नवीन यात्रा थालनी गर्ने यो निर्णय लिनु म एक्लैका लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन।’
उनले धनगढीका विजयेन्द्र सिहं रावतसँग लगनगाँठो कस्न लागेकी हुन्। आफ्ना परिवारका सदस्यको निरन्तर प्रयास, साथीसंगी, अग्रज र दिग्गज व्यक्तित्व लगायत शुभचिन्तकले दिएको हौसला, साहस र प्रोत्साहनकै कारण आफू यो निर्णय लिन सफल भएको उनले बताएकी छन्। श्वेताले थप लेखेकी छन्, ‘यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवश्य छ- के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णय स्वीकार गर्ला र? मलाई थाहा छ, श्वेताको आँखामा आँशु मात्रै देखिनुपर्छ भन्ने सोच बोकेका दुई चार जना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पो’ल्नेछ।’
यस्तो छ उनको स्टाटस: म: जीवनको नवीन यात्रामा। जीवनका विभिन्न आ’रोह-अवरोह, उकाली-ओराली, सुख-दु:ख अनि हाँसो-रोदनका पललाई आ’त्मसात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आइपुगेकी छु। जिन्दगीको यो मोडसम्म आइपुग्दा मैले जे-जस्ता पीर, व्यथा, दु:ख अनि क’ष्टसँग सामना गरेकी छु, त्यसभित्रको कहालीलाग्दो अनुभवहरूलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु। ‘अचानोको पीडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न’ भनेझैं समयको दु’श्चक्रले ममाथि प्र’हार गरेको अनेकन प्र’हार र त्यसबाट मैले भो’गेको पी’डा केवल मलाई मात्र थाहा छ।
म देख्थेँ, मेरो अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो जसमा तिखा काँडा, ठूलाठूला प’त्थर अनि आगोको ज्वाला छ’रपस्ट भएर छरिएका छन्। मैले मेरो जीवनको बाटोमाथि छ’रपस्ट ती काँडाहरूलाई प’न्छाउनु पर्नेछ। पत्थरहरूलाई फु’टाउनु पर्नेछ। अनि आगोको ज्वालाहरूलाई नाघ्नु पर्नेछ। ‘के म यसो गर्न सकुँला र?’ आफैंसँग प्रश्न गर्थेँ। आफ्नै प्रश्नमा आफैंले उत्तर दिन्थेँ, कि हुत्ती हारेर मर्नु पर्छ कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’ अत: मैले मृ’त्‍युलाई रोजिनँ, जीवनलाई नै रोजेँ। अनि जिन्दगीका हरेक स’मस्याहरूसँग जुध्दै क्रमश: अगाडि बढ्दै गएँ।
‘एक्लै जीवन का’ट्न सकिन्छ’ भन्ने क’ठोर निर्णय लिएर विगत ६ वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेकी थिएँ म। मेरो यो एकल यात्राका बखतमा धेरैपटक ल’डेकी छु। ‘अब उठ्नै सक्दिनँ कि’ भन्ने कमजोर भावले थि’चेको त्यो बेलामा आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै स’हाराको आशा हुँदो रहेछ। महिनैपिच्छे करिब हप्ता दिनका लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले एक गिलास पानीसँगै औ’षधिको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सहयोगको चाह हुँदो रहेछ। मनभित्र गाँठो परेर बसेका अव्यक्त वहहरूलाई बोकेर हिँड्नु भनेको हजार टनको पत्थरलाई टाउकोमाथि बोकेर हिँड्नुभन्दा पनि क’ठिन रहेछ।
तर मैले मेरा ब’हहरू व्यक्त गर्ने कोसँग? मैले साथीसंगतीहरूको भिडमा आँखा डु’लाएर हेरेँ, तर मेरो पीडालाई महसुश गर्न सक्ने कोही देखिनँ। आफन्तको घेरामा खोजेँ तर माइतीमा श’रण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पी’डा पोखेर माइतीलाई थप त’नाव दिनु हुन्न भन्ने मनन गरेँ। अत: मेरो हरेक दु:खमा म एक्लै रोएँ, पी’डाहरुमा आफैं सम्हालिएँ अनि अनेकन स’मस्याहरूसँग एक्लै जुधिरहेँ। ‘मेरो एकल जीवनलाई नि’यालिरहेका मेरा धेरै हि’तैषीले एउटा जीवन साथी खोज्नका लागि नसुझाएका पनि होइनन्। तर एकपटक पुछिएको सिउँदोमाथि पुन: सिन्दुर भ’र्न आँट गर्ने कुनै निःस्वार्थी हातहरू पाइन्छ र?
फु’टेको चुरासँगै च’क्नाचुर भएको मेरो वि’गत जोडेर एउटा सुन्दर आकार दिने स्वच्छ मनको धनी कोही भे’टिन्छ र? अनि विगतमा मैले गुमाएको मेरो चोखो मायालाई पुन: फर्काएर मेरो जीवनमा खुसीको रङ भरिदिने कुनै द’यालु मन पाइएला र? लौ, भनेको जस्तो निःस्वार्थी, स्वच्छ र नि’ष्कपटी व्यक्ति पनि पाइयो रे। अनि के यो पुरूष प्रधान समाजले मेरो दोश्रो जीवनलाई स्वी’कार गर्ला र?’ म मेरा हि’तैषीलाई प्रश्न गर्थेँ। आज, मैले मेरो एकल जीवनमा एउटा सहयात्री पाएकी छु। विगतको पी’डालाई भु’लाउने एउटा बहाना पाएकी छु।
मेरो अतीतलाई स’हर्ष स्वी’कार गरी मसँगै सुख र दु:ख बाँ’ड्न तयार एउटा साथी पाएकी छु। म, जीवनको दु:खद अध्यायलाई ब’न्द गरेर खुसीको अध्याय सुरू गर्ने निर्णयमा पुगेकी छु। त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अ’तीतलाई च’टक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन ।अ’तीतका मीठा पलहरुलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्यलाई सजाउने नविन यात्राको थालनी गर्ने यो निर्णय लिनु म एक्लैको लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन। तर मेरा परिवारका सदस्यहरुको निरन्तर प्रयास अनि साथीसंगतीहरू, अग्रज र दि’ग्गज व्यक्तित्वहरु लगायत मेरा शुभचिन्तकले प्रदान गर्नुभएको हौसला, शाहस र प्रो’त्साहनले आज म यो निर्णय लि’नमा सफल भएकी छु।
यति हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवस्य छ ‘के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्वीकार गर्ला र?’ मलाई थाहा छ ‘श्वेताको आँखामा आँशु मात्रै देखिनु पर्छ’ भन्ने सोच बोकेका दुई चार-जना व्यक्तिहरूलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ। श्रीमती स्वर्गीय भएको एक महिना नबित्दै नयाँ दुलही भि’त्र्याउन ह’तारिने तर घरकी बिधुवा बहिनीले पूरै जीवन एक्लै का’ट्नु पर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त केही व्यक्तिलाई मेरो यो निर्णयले च’सक्क घो’च्नेछ। तर मप्रति साहनुभूति राख्ने, मलाई सदैव खुसी देख्न चाहने अनि सधैं मेरो सफलताको कामना गर्ने लाखौं शुभचिन्तकहरूको आशीर्वाद, सद्भाव र सुभेक्षाले मप्रति रि’स र इ’र्ष्याको सोच राख्ने दुई-चार जनाले स्वत: हा’र खानेछन्।
अत: कोरोना सन्त्रासका बीच जु’रेको खुसीको माहौलमा मैले मेरा धेरै मित्रहरू, गन्यमान्य व्यक्तित्वहरू, संचारकर्मीहरू लगायत मेरा आफन्तहरू समेतलाई सा’मेल गराउन असमर्थ हुनेछु। महामारीको यो माहौलमा सीमित व्यक्तिहरूलाई सा’क्षी राखी जीवनको नयाँ यात्रा सुरू गर्दै गर्दा तपाईंहरू सम्पूर्णले मलाई आ’शीर्वाद दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएकी छु। उही तपाईंकी छोरी, श्वेता खड्का।
भैंसी व्यापारीसँग लिएको ४० हजार घु’स सशस्त्रका इन्स्पेक्टरले गरे फिर्ता